တရုတ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > centrifuge > Vacuum Centrifugal Concentrator ဖြစ်သည် > အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge centrifugal အင်အားလယ်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုနှုန်းကွဲပြားမှုကို အခြေခံ၍ နမူနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးခွဲခြားနိုင်သည်။
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge Based on the difference of precipitation rate in centrifugal force field, the samples can be analyzed and separated.
1. အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge Introduction
The ZLS seriesအပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifugeconcentrators comprehensively use centrifugation, vacuuming and heating to effectively evaporate solvents and efficiently recover biological or analytical samples. It is widely used in life sciences, chemistry, pharmaceuticals and other fields.
2. အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge Parameter
အခန်းအပူချိန် ~ 55C သို့အပူမရှိ
အတိုင်းအတာ (အလျား x အနံ x အမြင့်)
၅၀၀X ၄၉၀ X ၂၈၀ မီလီမီတာ
3. အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifugeFeature And Application
1: TFT မှန်အရောင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင် LCD display၊ အသိဥာဏ် microprocessor ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရိုးရှင်း။ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှု interface ကိုလက်ခံပါ။ အခြောက်ခံခန်းကိုအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြောက်ခံခန်း၏အတွင်းပိုင်းကို corrosion ဆန့်ကျင်သောကုသမှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
၂-ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသောအဆက်အသွယ်မရှိသော drive လည်ပတ်မှုစနစ်။
3: လက်ရာမြောက်သောဒီဇိုင်း၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
4: အသုံးပြုရန်ပံ့ပိုးသော rotors အမျိုးမျိုး။
6: အာရုံစူးစိုက်မှုအချိန်:0~ 99h59min
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge is widely used in experiments with small sample quantity, many steps, large centrifugal force and low temperature requirement. Such as: biochemistry, genetic engineering, agriculture and forestry disciplines, food hygiene, hospital and other scientific research units of the laboratory of the separation of samples.
5. အပြည့်အဝအလိုအလျောက် centrifuge detail
၁: GM-1.0A diaphragm pump
2: 2XZ-2 rotary vane pump တွင်စုပ်အားမြန်နှုန်း ၂ လီတာ/စက္ကန့်၊ အဆုံးစွန်ဖိအား 6*10 ~ 2Pa နှင့် 0.37 kW 220/50HZ စွမ်းအား
hot Tags:: အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Centrifuge၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
Vacuum Centrifugal Concentrator (သုတေသနအမျိုးအစား)